2020 Ukujonga ukubheja kweHambletonia – CYMRU
2020 Ukujonga ukubheja kweHambletonia
No Comments on 2020 Ukujonga ukubheja kweHambletonia
I-2020 ye-Hambletonia ithatha indawo kwiziko lokudyarha amahashe ngalo Mgqibelo. Ubanjelwe eMeeltlands, umsitho ubeka uphawu kwezona zilishumi zibalaseleyo emhlabeni ngokuchasene nebhaso lezigidi zeedola. Kunyaka nonyaka ngaphandle, kuthathwa njengowona msitho uphambili kumdyarho wamahashe owaziwa ngokuba ngumdyarho wehashe, utsala umdla wababukeli behlabathi kunye nabathethi.
Kanye njengokuba iKentucky Derby ithathwa njengolugqatso oluphezulu unyaka ngamnye kwinxalenye eqinisekisiweyo yomdyarho wamahashe, iHambletonia, eyonwabela uhlelo lwayo lowama-95 kulo nyaka kwaye ibibanjelwa eMeeltlands eNew Jersey, ime phezu komhlaba webhayikhi yomgangatho ofanelekileyo. Amanqanaba asebusweni ngamahashe akhuphisana kumlo wehashe. Umdyarho weempawu zomdyarho abaqhubi abakhokela amahashe abo ukusuka kwibhayisekile enjengevili elibizwa ngokuba yi-skyky ngasemva okutsalwa ngasemva kwesilwanyana, ngokuchasene nabaphetheyo, abanokujinga phezu kwabo.
Njengayo yonke eminye imidlalo onokuyicinga, umdyarho weenwele waphoswa kwi-disarray ngo-2020. Ngethamsanqa, umdlalo, eMelika, kunjalo, ubambe uninzi lweziganeko zayo eziphezulu kubushushu behlobo. Oko kuthetha ukuba imicimbi efana ne-Hambletonia ayifanelanga ukuba iguquke kakhulu nezicwangciso zohlanga.
Kodwa into ethe yachukunyiswa yimpazamo yayilinqanaba lamava abaxheli. Kukhuselekile ukuba uninzi lwabakhuphisana abalishumi kugqatso beluya kuba nokubaleka okungaphezulu kwebhanti ukuba bezingekho kwiinyanga ezintathu okanye xa bekungekho mdyarho e-United States. Oko kungakhokelela kumdyarho ongaqinisekanga ngakumbi ngomgqibelo.
I-2020 ye-Hambletonia izisa malunga notshintsho
I-2020 Hambletonia ikwamele phandle ngotshintsho kwindlela ebaleka ngayo ugqatso. Kwiminyaka edlulileyo, i-Hambo yayijikwa i-heats kwangolo suku lunye. Ukupheliswa kabini kwenziwa kwaye ke okokugqibela kwenzeka kamva emva kwemini.
Kodwa ngenxa yokuba umdyarho wobushushu uhambe ngendlela yentaka ye dodo kwelona candelo likhulu lezemidlalo, kwagqitywa kwelokuba le nkqubo kufuneka ibekwe edlelo. Ngenxa yoko, ukupheliswa ukuseta intsimi ye-2020 ye-Hambletonia kwenzeka ngokwenene ngoMgqibelo odlulileyo. Inika abathengi ngaphezulu kwethuba lokufunda ngamahashe endaweni yokuba ubheje impukane.
Inye into engasokuze itshintshe malunga neHambletonia: iyavuya njengoko ingena kumdlalo wokuba ngumdyarho wamahashe. Oko kuqhuba ixesha elide kwiBig M yinto yemizuzwana nje kuphela kodwa kunokubonakala ngathi yinto engapheliyo xa la mahashe azama ukuthimba awona mvuzo mkhulu wonyaka. Ababheji bayayazi loo mvakalelo njengoko bezama ukwenza ukuthanda kwabo ihashe ukuba baye kumgca wokugqibela.
Silapha ukukunceda ukhethe owuthandayo ngalo mboniso wama-2020 wokubheja kweHambletonia. Kuqala, siza kukuthatha kwindawo nganye kwezi zilishumi kuzo zonke ugqatso kwaye sithethe ngamandla abo kunye nobuthathaka babo. Kwaye ke sikunika ukhetho lwethu lokuba ngubani esicinga ukuba uza kuphuma phambili kolu lubalaseleyo.
2020 Iinkcukacha zeHambletonia
Phi: I-Meadowlands Racetrack eNew Jersey
Xa: NgoMgqibelo, Agasti 8, 2020, ixesha lesithuba malunga ne-4: 30 PM Ixesha laseMpuma
Ngubani: I-10 yeminyaka ubudala i-trotters
Ixesha elide: i-1 mile
Yimalini: $ 1 yesigidi semali
I-2020 abaHambletonia abaKhuphiswano be-1 -Ikulungele iMoni (uYannick Gingras, uNancy Takter), 3-1
Umqeqeshi uNancy Takter kufuneka abenethuba lokwenene lokukhupha uloyiso lwakhe lokuqala lweHambletonia lokutshatisa ezintathu ezathatyathwa nguyise uJimmy. Ulungele uMoni obalaseleyo kwimpumelelo yakhe yoloyiso ngoMgqibelo ophelileyo, eqhuba imayile kwaye ebambe kakuhle phantsi koxinzelelo. Ithole ngoku li-2 kwi-2 ngo-2020. Umdyarho weHarnessLe iza kuba loloyiso ku-Gingras, osafuna umdlalo wakhe wokuqala uHambo kodwa uthathwa njengelinye lawona midlalo. Umkhulu njenge-2 yeminyaka ubudala, uLungele uMoni ujongeke ngcono ngakumbi kule sizini kwaye wenza ukuqala kwakhe konyaka, ngoku lixesha elililo lokudlala umdlalo. Ukuba ufumana ispike, kuya kuba nzima ukuyikhaba le ntshatsheli.
I-2-Emva kweNcam (Scott Zeron *, Ake Svanstedt), 4-1
Kwilizwe lokuphamba, akukho mntu ufumana imbeko njengomqeqeshi u-Ake Svanstedt. Kwaye kusoloko kubonakala ngathi utsiba kunye namahashe angahoyisi kangako kuye wonke umntu. Yiloo nto kanye eyenzekileyo kwiminyaka emithathu eyadlulayo xa wafumana uloyiso kunye noMoya ogqibeleleyo ekucaphukeni.
Umqhubi u-Zeron naye uphumelele kwi-Hambletonia kwisibuko sakhe sasemva komva, ephumelela ugqatso kuzo zombini i-2016 kunye ne-2018. Kuya kufuneka kube nomdla xa ekhetha la mahashe kwaye, ukuba uyakwenza, ukuba uyatyhalela uMva kweNcam ukuze akhokele kwakhona njengoko wenza ngokushenxisa. Ukuhambisa i-duel ekhawulezayo kunye ne-Ready For Moni kubonakala ngathi kungangumsebenzi onzima, omnye onokuthi ushiye omabini amahashe ukuba mabanxibe xa istraw drive ifika.
I-3-Ibali laseHollywood (Tim Tetrick *, Marcus Melander), 15-1
Le yeyokuqala kwezintathu zokungenelwa kukaMarcess Melander kugqatso, zonke ezo zihamba ngokungahambi kakuhle ngo-15-1. UMelander unamahashe kubonakala ngathi akuyo yonk ‘indawo kwinqanaba elinesibini elineminyaka emithathu, kwaye uyathanda ukongeza i-Hambletonia kwityala lakhe lesidlangalala.
← Kutheni le nto iMax Wins kwi-infinity Reels Slots limited? → Kutheni sicebisa ukuba sidlale iiSlots zaseNtlalontle